GA2 1080p FHD Action Camera - Shenzhen China GJT Teknolojia
[1080p 30 FPS MANONTOLO HD]: Featuring HD 1080p feno sary sy ny 12M vahaolana, ny fakan-tsary GJT zavatra mahatonga anao ho afaka hitondra avo lenta sary sy lahatsary. [MANDINIKA-NY Wi-Fi & HDMI Output]: Vao télécharger App 'Ez iCam' amin'ny finday na ny takela-kazo, ary mifandray amin'ny hetsika io fakan-tsary, dia azonao atao amin 'ny ...
[1080p 30 FPS MANONTOLO HD]: Featuring HD 1080p feno sary sy ny 12M vahaolana, ny fakan-tsary GJT zavatra mahatonga anao ho afaka hitondra avo lenta sary sy lahatsary.
[MANDINIKA-NY Wi-Fi & HDMI Output]: Vao télécharger App 'Ez iCam' amin'ny finday na ny takela-kazo ary mifanerasera an'io asa io fakan-tsary, dia afaka mifehy azy io amin'ny alalan'ny marani-tsaina fitaovana, ny Wi-Fi tenimiafina dia '1234567890 'sy ny faneva ny fiaretana hatramin'ny 10 metatra.
[Tantera-drano UP TO 30M]: Miaraka amin'ny trano mafy orina tantera-drano, dia afaka mitsoraka any anaty rano ambanin'ny 30M. Lavorary ny rano fanatanjahan-tena, toy ny lomano, antsitrika, hilalao onja sy ny sisa.
[Dual Screen]: Dual Mini lamba ary mirefy 0,82 ultrathin hatevin'ny, izay mampiseho vatoaratra sy ny fombafomba ary izany sata mety hijery fanatanjahan-tena fakan-tsary fandidiana. Ny famaritana avo mirefy 2.0 LCD lamba dia afaka haneho sy hanopy maso lahatsary sy ny sary amim-pahombiazana.
[Maro tovon SY ACCESSORIES]: tonga noho ny tovon mahavariana maro be sy ny fitaovana, ka mahatonga ny fakan-tsary natao ho an'ny hitifitra fiteny maro samy hafa fanatanjahan-tena, toy ny bisikileta, motorcycling, mitondra fiara, mihazakazaka, rehefa niakatra, antsitrika, tia manao ski ambony sy nilomano etc.
Previous: GNR 2 360 Degree Panoramika Video
Manaraka: GA1 1080p FHD Action Camera
30m tantera-drano Action DV
30m tantera-drano Sport Action Camera
4K tantera-drano DV Action Camera
720p tantera-drano Action Camera
Action Camera Dvr fiarovan-doha
Action Sport fiarovan-doha Camera
Action Sports fiarovan-doha Camera
Levitra 4K Action Camera
Tsara Quality 4K Action Camera
HD 1080p tantera-drano DV Action Camera
HD 720p tantera-drano DV Action Camera
Action HD Camera Wifi
Wifi Action HD Camera
Fanatanjahantena fiarovan-doha Action Camera
Ivelan'ny trano Action Camera
Tantera-drano Action HD Camera
Tantera-drano Sport Action Camera
Tantera-drano Sports Action Camera
Tantera-drano Wifi Action Camera